Shiinaha Kraft Paper Waraaqda Joogtada ah kiish warshad iyo saarayaasha | Hong Bang
Waraaqda Kraft istaag
Waraaqda Kraft istaaga kiish
Warqadda istaaga kiishku waa qaabka baakadaha ugu caansan ee suuqa maxaa yeelay qaabkan baakadyadu waa mid wajiyo badan oo wax ku ool ah sidoo kalena soo jiidasho leh. Sida magaca laftiisa ka muuqata, boorsooyinkani waxay awoodaan inay istaagaan meel kasta oo adag. Waxay leedahay awood soo bandhigid shelf oo weyn waxayna yareyn kartaa baahiyaha keydinta iyo kordhinta boosaska shelf. Badanaa, boorsada istaagga waxaa badanaa loo isticmaalaa cunnada fudud, uunsiga, dahabka, shaaha ama baakadaha baakadaha. Guryaha kiishka taagan
kiishka istaaga waxaa laga soo saaray dhowr lakab oo ah walxaha carqaladeeya oo loo kala saari karo 3 koox oo waaweyn, kuwaas oo isu taga si ay u siiyaan kiishka astaamo cimri dherer iyo dalool u adkaysta. Saddexdaan kooxood waa:
lakabka kore: wuxuu u oggolaanayaa daabacaadda garaafka inay dhacdo, qaadista xayeysiinta oo la xiriirta farriin astaan ​​ah oo rafcaan u leh macaamiisha.
lakabka dhexe: wuxuu u dhaqmaa sidii caqabad difaac ah si loo hubiyo in waxyaabaha ku jira kiishka la xafido oo ay ahaadaan kuwo cusub.
lakabka gudaha: lakabka ugu muhiimsan saddexda. Lakabkaan badanaa waa fda la ansixiyay si loo hubiyo in cunnadu nabdoon tahay markay taabato xirmada. Sidoo kale waa kuleyl-ku-xirnaan si loo xaqiijiyo macaamiisha in kiishka aan la fara-gelin.
boorsada istaagga ayaa sidoo kale u oggolaaneysa astaamaha la beddeli karo sida jiinyeerrada, godadka sare, jeexjeexa jeexjeexyada iyo isboortiga si kor loogu qaado nabadgeliyadeeda waxqabadka iyo tayada sare waxay noqon doontaa mabda'a koowaad Dhamaan badeecadeena waxaa lagu sameeyaa maadada darajada cuntada taasoo micnaheedu yahay filimka aan isticmaalno, khadka iyo khadka soo saarida ayaa 100% u ah amaan qofkasta oo qaan gaar ah xitaa cunug. Dheeraad ah, waxaan ku adkeyneynaa tayada taas oo macnaheedu yahay dulqaad la'aan nooc kasta oo tanaasul ah oo muujinaya dhismo xoog leh, ciriiri hawo iyo daabacaad cad. Baakadaha adag iyo kaamil ah ee baahida macaamilka had iyo jeer waxay noqon doonaan ujeedkeenna.
muuqaalka kore ee kiish sare
ur cadayn cadayn cad
daaqad cadeyn ah oo daata oo ka faa'iideysata banaanka saaxiibtinimada vivi naqshadeynta walxaha isbeddelaya ee dib loo isticmaali karo
miisaanka fudud iyo qaadista ciyaarta dheelitirka lahayn fudud si ay u istaagaan
bpa, lead, pvc, naqshadeynta bilaa phthalate-ka ah ee loo habeeyay
halkan waa baakadaha hongbang. Waxaan bixinaa xalal kala duwan oo baakadaha cuntada loogu talagalay baahiyaha iyo codsiyada kala duwan. Soo-saarkeenu wuxuu aqbalaa nooc kasta oo alaab ah. Waxaan ka dhigi karnaa badeecadaada muuqaal ka duwan sida dusha sare, dusha dhalaalaya ama aan ku wada tusno iyaga baakada. Noo sheeg shuruudahaaga waxaan buuxin doonaa dhammaan baahiyahaaga. Ma horumarinayno alaabada oo waxaan isku dayeynaa inaanu kuu kaxeyno dhankooda; Waxaan dhegeysaneynaa baahiyahaaga iyo injineernimada hal-abuurka ah ee xallin doona caqabadahaaga baakadaha.
adeegyada iyo damaanad qaadka waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah oo adeegga macaamiisha ah si aan uga jawaabno uguna xallino su'aasha 24 saacadood gudahood. Kiis kasta wuxuu lahaan doonaa qof gaar ah si loo hubiyo in nashqadda, tirada, tayada iyo taariikhda la bixinayo ay la jaan qaadayaan shuruudaha. Waxaan jecel nahay in aan bixinno adeegga ugu fiican isla markaana aan taageerada ugu badan siinno macmiilkeenna.
Hore: Gaarsiin Degdeg ah oo loogu talagalay Baakadaha Cuntada ee Caadiga ah - Boorsada Cad ee Caddaanka ah ee guntinta hoose ee Flat - Hong Bang
Xiga: Bacda raashinka
Roll Khatimidii Vacuum 10 ″ X 50′- 2 ...